हत्केलामा यी ५ चिन्ह हुने मान्छे सधै दुखि हुन्छन तपाई का पनि छन् कि ? - IAUA
हत्केलामा यी ५ चिन्ह हुने मान्छे सधै दुखि हुन्छन तपाई का पनि छन् कि ?
ramkrishna October 4, 2017	handहत्केलामा यी ५ चिन्ह हुने मान्छे सधै दुखि हुन्छन तपाई का पनि छन् कि ?
भनिन्छ समुन्द्र शास्त्रका अनुसार हरेक ब्यक्तिको हत्केलामा ब्यक्तिको पुरै जिन्दगीको लेखा-जोखा हुन्छ । यसलाई ब्रम्हा लेख पनि भनिन्छ ।जन्मको समय थाहा नभएपनि हत्केलालाई जन्मपत्रिका मान्ने समेत चलन छ ।हत्केलामा रहेका कैयौं रेखालाई समुन्द्र शास्त्रले एकदमै शुभ मानिएको छ भने कतिपयलाई अशुभ मानिन्छ । कतिपय चिन्हले हत्केलामा भएका शुभ रेखालाई समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने ज्योतिष शास्त्र बताउँछ ।
1. कुन चिन्ह भएको अशुभ हुन्छ त ?
हत्केलामा क्रशको चिन्ह छ भने यो अशुभ मानिन्छ । यो रेखाले अन्य शुभ रेखाको फलसमेत काट्ने ज्योतिषशास्त्रीहरु बताउँछन् । भाग्य रेखामा यो चिन्ह हुनु भाग्यमाथिको रोकावटकोरुपमा बुझिन्छ । विवाह रेखामा यस्तो चिन्ह हुनु बैबाहिक जीवनमा बाधा हुने र विवाह सम्बन्धी कुरामा अड्चन आउन मानिन्छ । जीवन रेखामा परेमा यसलाई संकटकारी नै मानिन्छ ।
Previous Previous post: यी स्थानमा कोठी भएकाहरू हुन्छन् भाग्यमानी
Next Next post: महाभारतका केही रोचक प्रसंग